Momba anay - Chengdu Baishixing Science and Technology Industry Co., Ltd.
Chengdu Baishixing dia naorina tao amin'ny 2003 ary manam-pahaizana amin'ny fampivelarana, fivarotana, famokarana asidra amino D, asidra amino arovana, derivatives amino asidra, peptide, heterocyclic compounds, vitaminina, mpanelanelana vita amin'ny pharmaceutika.
Ny orinasanay dia mahazo ny ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO22000: 2005, OHSAS 18001: 2007, KOSHER, izay voatanisa ho orinasam-pampandrosoana ara-tsiansa sy teknolojia ao Chengdu tamin'ny taona 2012. Manana patanty modely 6 izahay, patanty 1 ary PCT famoronana 8 patanty iraisam-pirenena.
Ny orinasanay dia miara-miasa amin'ny Oniversiten'i Wuhan mba hamolavola vokatra andiany asidra amino.Ankehitriny ny postdoctor nahazo diplaoma avy any Soisa dia mitarika ny ekipan'ny R&D, miaraka amin'ny fanampian'ny profesora ao amin'ny Oniversiten'i Wuhan, hikaroka sy hamolavola vokatra vaovao ary hanatsara ny fizotran'ny famokarana ankehitriny.
Ny vokatray dia mahafeno ny fenitry ny United States Pharmacopoeia (USP), European Pharmacopoeia(EP), ary Ajinomoto (AJI);izany no be mpampiasa amin'ny sakafo, fanafody, ary ny makiazy indostria & Cell kolontsaina.Taorian'ny asa voatokana nandritra ny taona maro dia nanangana ny fifandraisana ara-barotra miaraka amin'ny firenena sy faritra 20 mahery eran'izao tontolo izao izahay.
Nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'izao, manana ny fitsapana vaovao toy ny: HPLC, GC, UV spectrophotometer, elektronika famakafakana fifandanjana, refy metatra metatra, hamandoana metatra, potentiometer, lafaoro, sns;R&D vaovao fitaovana toy ny: 2-50L Rotary Evaporator, 50L fitaratra fanehoan-kevitra kettle, 2-10L avo tsindry fanehoan-kevitra kettle, vata fampangatsiahana, vacuum paompy rafitra, sns, izay saika ampy ho an'ny kalitao fitsapana sy ny vokatra vaovao fampandrosoana.
★Fampiharana ny fitantanana ny dingana
★Fikarohana ny kalitao avo indrindra
★Fanatsarana tsy tapaka
★Manomeza vokatra mahafa-po ho an'ny mpanjifa
Dl-Pyroglutamic asidra, L-Glutamine vovoka, Acetyl-L-Leucine, Pharmaceutical Chemical, 537-55-3, L-Leucine,